no indray nitsidika ny ozinina Ambatovy ny alatsinainy 3 janoary 2020 teo. Nampahafantatra fohifohy ny ambangovangon’ny fihodin’Ambatovy tamin’ireto vahiny ireto moa ny filohan’Ambatovy, Stuart Macnaugthaun. Ny mikasika ny fitrandrahany Nikela sy Kaobalita izay mampiavaka azy, raha ny fanazavana, dia izy iray tsy mivaky amin’ny fitrandrahana tanterahana manontolo eto Madagasikara ary mitondra vokatsoa miavaka eo amin’ny toekarena izay fitrandrahana ka hatramin’ny fandiovana atao eto Madagasikara avokoa izay. Nitohy ny fitetezana ity ozinina manana velaran-tany 320ha ity ary anisan’ny notsidihan’ireto masoivoho ireto ny toerana misy ny milina fanodinana ireo vokatra na “raffinerie”. Fampiasam-bola fakan-tahaka i Ambatovy, hoy ny masoivoho koreanina. Ilaina ny fisian’ny fifanarahana tsara eo amin’ny governemanta Malagasy sy ny orinasa avy any ivelany, hoy ny frantsay. Nahaliana ahy ny fahitana ny maha zava-dehibe ny fandraisana anjaran’ny sehatra tsy miankina amin’ny fampandrosoana, hoy kosa ny amerikanina.